Sidee Ganacsatadu ula macaamili karaan Madal kasta oo Warbaahinta Bulshadda ah | Martech Zone
Sidee Ganacsatadu ula macaamili karaan Madal kasta oo Baraha Bulshadu ku kulanto
Arbacada, Maarso 7, 2018 Arbacada, Maarso 7, 2018 Douglas Karr
Aragtidayda ku aaddan baraha bulshada inta badan way ka duwan tahay kuwa ku jira warshadayda. Aragti ahaan, waxaan jeclahay baraha bulshada iyo fursadda ay siiso ganacsiyada si ay u gaaraan macaamiisha iyo rajooyinka heer shaqsiyeed. Xaqiiqdu aad bey uga duwaneyd inkasta oo.
Waxaan daawaday ganacsiyada isku dayaya inay u adeegsadaan warbaahinta bulshada si la mid ah sida ay u sameeyaan wadiiqooyinka kale ee suuq geynta. Xaaladaha qaarkood, tani waxay u horseedday embarassment cajiib ah respons jawaabo aalado ah oo si cad loogu sameeyay baraha bulshada ee adeegsada warbaahinta bulshada oo waxyeeleeya sumad, iyagu ma caawiyaan. Mararka kale, waa in magacyadu aysan u arkin fursad ay ku xalliyaan arrin fagaare ku taal, iyagoo siinaya kordhinta wanaagga ay sameyn karaan.
Suuqa adduunka ee maanta, waa adduun ay ganacsatadu ka kala yimaadeen dhammaan aduunka oo dhan waxaa laga heli karaa suuliga farta taleefanka gacanta, joogitaankaaga internetka waligiis ma uusan ka muhiimsaneyn. Waxaad ubaahantahay inaad ka soocnaato tartamayaashaada, diyaar u ahaw su'aalaha iyo weydiimaha oo aad xiriir la sameyso macaamiishaada si ay mar labaad iyo mar labaadba u adeegsadaan adeeggaaga. Hadaad si sax ah u sameyso, meesha ugu fiican ee laga sameeyo taasi waa baraha bulshada.
TollFreeForwarding.com ayaa si hufan u magacowday xogtooda ugu dambeysay. Aadaabta Ganacsiga Warbaahinta Bulshada. Runtii waan jeclahay isticmaalkooda ereyga anshaxa halkii istiraatiijiyad, qorshe, ama hage. Qeexida asluubtu waa xeerka dhaqanka ee anshaxa wanaagsan bulshada dhexdeeda ama xubnaha xirfad gaar ah ama koox gaar ah. Boom! Waxaa jira rajo laga qabo sida ganacsiyada ay ula socdaan, uga jawaabaan, uguna horumariyaan naftooda baraha bulshada - iyo infoorraafkan ayaa shaqo weyn ka leh qeexitaankiisa
Facebook - si deg deg ah oo wax ku ool ah uga jawaab codsi kasta oo aad u soo mariso Boggaaga Facebook. Iska ilaali inaad isticmaashid hashtags, si ballaaran looguma isticmaalo madasha.
Instagram - isticmaal sheekooyin si aad u siiso shakhsi ahaaneed, daaha gadaashiisa fiiri meheraddaada. Noqo mid iswaafaqsan magacaaga, miirayaasha la adeegsaday, una isticmaal hashtags si hufan.
Twitter - Isticmaal barxad lagu daabaco warbaahinta bulshada sida kafaala qaadayaashayada, Agorapulse, si aad jadwal u sameysato, aad saf u gasho, una hagaajiso sii deynta farriimahaaga. Ka fogow is-weydaarsiga isla markaana ku fal-gal mawduucyada soo socda iyo ishtags-ka.
Youtube - abuuro sawirro yar yar oo caado ah, ku dar kaararka cinwaanka, kuna dhiirrigeli rukumaynta kanaalkaaga adoo adeegsanaya dusha sare iyo fiidiyowyo isku xiran.
Pinterest - ku dheji waxyaabaha ka socda isticmaaleyaasha kale iyo saamileyaasha si ay ula macaamilaan bulshadaada. Hubso in dhammaan sawirada boggaaga si fudud loo soo jiidan karo - ku dar Pinterest pin It Badhanka.
LinkedIn - si otomaatig ah ha u qorin isku xirnaanta emaylkaaga suuq geynta. La wadaag waxyaabaha ku habboon ee warshadaha si aad ugu dhisto kalsoonidaada iyo saameynta aad ku leedahay barxadda.
Waa tan faahfaahinta weyn, Aadaabta Ganacsi ee Warbaahinta Bulshadda: Madalmahee La Heli Karaa.
Tags: brandingekspertenaadaabta ganacsigaanshaxaFacebookfiltarradahashtagsInstagramLinkedInku dhejiPinterestaadaabta warbaahinta bulshadamowduucyada u janjeeraTwitteryoutube
Muuqaal: Shaashadda Muusikada ee Apple Watch, iPad, ama Mac
JawaabTap: Smart Match Raadinta Wicitaanka Sirdoonka